Polyethylene Glyeol 300 isikhonkwane ...
Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] N-COOH. Okuqukethwe komswakama%: ≤2.0% I-viscosity: 29400 ～ 39400 mPa.s I-Carboxylic acid Okuqukethwe%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): -20ppm Solids Solvents%: ≤60 ppm Izici: Inokuzinza unomphela ku-viscosity ephezulu , futhi ilungele ukuphathwa ngomlomo ngenxa yenani elincanyana le-solidid solvent. Ububanzi Bokufaka Isicelo: Ukulawulwa ngomlomo, ukuphathwa okuyingxenye kanye nohlelo olusha lokulethwa, ngoku ...
Lo mkhiqizo yi-acrylic acid eboshwe i-allyl sucrose noma i-pentaerythritol allyl ether polymer. Ngokusho komkhiqizo owomile, okuqukethwe kweqembu le-carboxylic acid (- COOH) kufanele kube ngu-56.0% - 68.0%. Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] N-COOH Ukubukeka: Impuphu emhlophe evulekile PH Inani: 2.5-3.5 okuqukethwe umswakama%: ≤2.0% I-viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Okuqukethwe kwe-asidi%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): -20ppm Solids Solvents%: ≤20ppm Izici: It h ...
ICarbopol, eyaziwa nangokuthi i-carbomer, iyi-resin enqamula i-acrylic enqamulelwe ne-acrylic acid nge-pentaerythritol njalonjalo. Kungumlawuli we-rheology obaluleke kakhulu. Ngemuva kokuncipha, i-Carbomer iyi-matrix enhle kakhulu ye-gel enokuqina, ukumiswa nokunye ukusetshenziswa okubalulekile. Inenqubo elula nokuzinza okuhle. It is kabanzi emulsion, ukhilimu kanye gel. Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] Ukubukeka kwe-N-COOH: i-powde emhlophe evulekile ...
Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] N-COOH Ukubukeka: I-White powder evulekile i-PH Value: 2.5-3.5 Okuqukethwe Umswakama%: ≤2.0% I-Viscosity: 2000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Okuqukethwe kwe-Acid%: 56.0-68.0% Heavy Metal ppm: ≤20ppm Solids Solvents%: ≤60ppm Isikali esinconyiwe seCarbopol 971: 0.2-1.0% Electrolyte equkethe ukunakekelwa kwesikhumba emulsion, ukhilimu, ijeli esobala equkethe utshwala, ijeli yokunakekela isikhumba esobala, isitayela sezinwele ijeli, imoto kanye nejeli yokugeza. Isici ...
I-Carbopol 941: ukugeleza okude, i-viscosity ephansi, ukucaca okuphezulu, ukumelana ngokulingene ne-ion nokumelana neshear, efanelekile ku-gel kanye ne-emulsion. Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] N-COOH Ukubukeka: impuphu emhlophe evulekile PH Inani: 2.5-3.5 Okuqukethwe kokumunca%: ≤2.0% I-Viscosity: 4000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Okuqukethwe kwe-Acid%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): ≤20ppm Solids Solvents%: ≤0.2% Product Lntroduction Umkhiqizo uyi-polymer ye-acrylic ene-polyenyl ether cross ...
ICarbopol, eyaziwa nangokuthi i-carbomer, iyi-resin enqamula i-acrylic enqamulelwe ne-acrylic acid nge-pentaerythritol njalonjalo. Kungumlawuli we-rheology obaluleke kakhulu. Ngemuva kokuncipha, i-Carbomer iyi-matrix enhle kakhulu ye-gel enokuqina nokumiswa. Ilula, izinzile futhi isetshenziswa kabanzi emulsion, ukhilimu nejel. Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] N-COOH Ukubukeka: impuphu emhlophe evulekile i-PH Value: 2.5-3.5 Okuqukethwe Umswakama%: ≤2.0% ...
I-Carbopol 934: i-resin polyacrylic acid resin, uhlelo lokulethwa kwezidakamizwa lwasendaweni, oluzinzile e-viscosity ephezulu, esetshenziselwa i-gel, emulsion nokumiswa. Igama Lamakhemikhali: I-Polyacrylic Acid Resin Isakhiwo Samangqamuzana: - [-CH2-CH-] N-COOH Ukubukeka: I-White powder evulekile i-PH Value: 2.5-3.5 Okuqukethwe Umswakama%: ≤2.0% I-viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Okuqukethwe kwe-Acid%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): ≤20ppm Solids Solvents%: ≤0.2% Izici: Umthelela wokuqina muhle, futhi unomphela ...
ICarbomer 980 yinto esetshenziswa kakhulu ku-carbomer. ICarbomer iyi-polymer ephezulu yamangqamuzana e-acrylic acid allylic sucrose noma i-pentaerythritol allyl ether. Imvamisa iba mpuphu emhlophe emhlophe emhlophe evulekile. Ingakhiqiza ukusebenza kahle okukhulu ukuqina ngaphansi kwesilinganiso esiphansi, ngaleyo ndlela ikhiqize ububanzi be-viscosity ebanzi kanye nezakhiwo ze-rheological ze-emulsion, ukhilimu, ijeli nokulungiselela kwe-transdermal. Izici ze-carbomer ehlukile zihlukile kancane. Izinhlobo ezahlukahlukene zimelela ama-viscosities ahlukene, ngakho-ke ...